6 Habdhaqanka Ugu Wanaagsan Ee Ay Tahay In Aad Raacdo Markii Aad Dhisaysid Bog Aan Ka Bixin Cinwaankaaga | Martech Zone
Arbacada, December 6, 2017 Axad, Disembar 10, 2017 Douglas Karr
Waxaan wadaagnay tirakoobyada qaarkood sababaha ay dadka uga baxaan emaylkaaga suuqgeynta ama joornaalada. Qaar ka mid ah xitaa ma noqon karto qaladkaaga, maadaama macaamiisha ay ku qulqulayaan emayl aad u tiro badan oo kaliya ay u baahan yihiin xoogaa gargaar ah. Markay macmiilku helayo oo uu riixayo iskuxirka ka-saarista e-maylkaaga, maxaad samaynaysaa si aad isugu daydo inaad u badbaadiso?
Waxaan dhawaan ku sameeyay taas Biyo macaan, Goob qalab maqal ah oo cajiib ahayd in lala shaqeeyo. Waxaan ku dhawaaday inaan xumaado markaan gujinayo xiriirka liis-ka-saarista, laakiin ma iibsado si isdaba-joog ah oo ku filan heshiisyada emaylka ee imanaya dhowr maalmood kasta. Markii aan riixaayay cinwaanka ka-joojinta, waa tan waxa lay keenay:
Sidee qabow waa taas? Halkii aan wax walba iskaga diiwaangelin lahaa, waxaan iska yareeyay inta jeer bishiiba mar.
Haddii aan dhali lahaa boggan, waa inaan siiyaa A +! Kaliya maahan inay bixiyaan ikhtiyaarro ku saabsan soo noqnoqoshada, wali waxay qabtaan shaqo weyn oo i ogeysiineysa waxa iga maqnaan kara iyo sidoo kale dejinta filashooyinka mid walba. Tani waxay la socotaa iyadoo la sii daayay Epsilon infographic, Raadinta Sanduuqa Insubscribe, Aqoonsiga 6 habdhaqan ee ugu wanaagsan ee email kasta oo soo diro ay tahay inuu raaco markii uu la macaamilayo macaamiisha:
Xulashada Isgaarsiinta - ku jooji "dhammaan ama waxba" bogga ka-saarista oo soo bandhig hab ku habboon oo bixiya heerar kala duwan oo ka-qaybgal ah.
Hal-Guji Unsubscribe - haka dhigin wax dhib ah inaad ka baxdo. Dareenka ugu dambeeya ee aad ka qabto qof ku siiyay fursad aad kula hadasho ma aha inuu ka xanaajiyo adigoon u oggolaan inuu tago.
Nadiifi Unsubscribe - cabbir yar oo font ah, oo ku gabanaya meheradaha gadaal, hubinta cinwaanada emaylka… joojinta adkaynta helitaanka iyo ka saarista Haddii dadku rabaan inay baxaan, ha iska daayaan.
Nadiifi Macaamiisha - haddii aad rabto inaad ilaaliso meelaynta sanduuqa wanaagsan iyo halbeegyada hawlgelinta adag, nadiifi liistada macaamiishaada aan ka hawlgalin sannad ka badan (ama ka badan haddaad xilli tahay).
Fursadii ugu dambeysay - ka hor intaadan nadiifin macmiisha aan xirnayn, ka dhig iyaga fursad jaanis ah ee ugu dambeysa si aad u aragto haddii ay jeclaan lahaayeen inay sii joogaan.
Hel Jawaab celin - sida tusaalaha kore, kama tagayo Sweetwater… Ma aanan dooneynin emayladooda si isdaba joog ah. Ha u qaadan shaqsi ahaan marka macmiilku ka tago. Sanduuqa sanduuqa maanta waa mid cakiran oo ay adag tahay in la maareeyo, macaamiishaadu waxaa laga yaabaa inay kaliya doonayaan inay wax yaroo hagaagaan. Haddii aad xiiseyneyso sababta aad uga tagtay, weydii iyaga oo ku jira boggaaga ka-saarista.
Raadinta sanduuqa: Ka-saar liiska
Tags: inta jeer ee emaylkaepsiloninta jeerliistada nadiifinadiifi macaamiishasababaha ka bixidabiyo macaanUnsubscribeka saar bogga
Maxay Tahay In Shirkadaadu Ay Hirgaliso Wadahadal Toos ah